Disk kasta oo lagu rakibay ayaa OS ku yaal ayaa isku xigxiga sida ay taas kabaha nidaamka ku OS iyo user ka bilaabi kartaa shaqeeya si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay waxaa la helay in arrintan la xiriira. Waxaa jira dhowr arrimood oo keeni dhibaatada miiska xijaab aan waxba ka jirin oo sabab la mid ah tutorial tan loo qoray si ay u hubiyaan in user la cafiyo arrintan la xiriira. Sababaha ugu badan tahay waa badan yihiin, laakiin waxaa wax yar in lagu sharxi karaa si faahfaahsan si loo hubiyo in user ka soo kaban karto xogta ama loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay ahbaa arrintan la xiriira ee la xiriirta ku samayn karto dhibaatada si haddii ay jirto arin la mid ah mustaqbalka waa la karaa iyadoo aysan arrinta iyo dhibaato.
Arrimaha keenaya arrinta
Ka dib markii qaar ka mid ah arrimaha la xidhiidha dhibaatada iyo u badan tahay waxaa sabab:
Waa mid ka mid ah arrimaha ugu wajahay arrintan la xiriira iyo keenaysaa in dhibaatada. Marka nidaamka waa la xidhay jidka untraditional kaliya qoruhu waxaa u kharribmay. Sababaha kale waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa drive ay waxyeelo adag ka dhamaadka saaraha ama haddii uu maray dhabar jab ku ah nooc kasta. Waa sabab la mid ah in user waa in la hubiyo in musuqmaasuqa qoqobkii waxaa sidoo kale la baari sameeyo.
Arrinta isku xigxiga Boot
Mar walba ma musuqmaasuqa Risaalo laakiin sidoo kale waa isku xigxiga boot in loo jeediyo in la hubiyo in user helo qalad ah. Si loo hubiyo in arrinta la xalin user waa Boot nidaamka iyo riix furaha F8 si loo hubiyo in menu boot la heli markaasuu meeshaas uga drive adag tahay in la qarka u saaran inuu mudnaanta si ay u hubiyaan in mar kasta oo ay nidaamka la bilaabay OS waxaa ku raran ka drive iyo nidaamka la bilaabay in arrintan la xiriira.
Sida loo xaliyo dhibka miiska xijaab aan waxba ka jirin
Si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa si loo hubiyo in tallaabooyinka lagu xusay in arrintan la xiriira oo aan la raacin oo keli ah, laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan in waa hubaal in waxa loo baahan yahay in arrintan la xiriira. Deegaanka ayaa soo kabashada ayaa la hirgaliyey OS kasta oo gudahood waa inuu xaqiijiyo in user helo arrinta la xalin gacanta ugu horeysay oo mustaqbalka haddii qalad la mar kale soo wajahay ka dibna sidoo kale user ka heli kartaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay ee ku saabsan arrintan la xiriira . Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in tallaabooyinka lagu xusay lahaa in qayb ka mid ah tutorial la raacay habka ugu fiican in la hubiyo in user ma aha oo kaliya helo natiijada la doonayo laakiin arrinta guud ayaa sidoo kale waxaa lagu xalin sida ugu dhakhsaha badan habka in halkan ku xusan waxaa laga codsadaa. Tallaabooyinka in ay ku lug leeyihiin in arrintan la xiriira kala duwan laga yaabaa in nidaamka nidaamka laakiin guud ahaan waxay kala yihiin:
Hagaajinta nidaamka dib markii booting jawi soo kabashada.
Isticmaalka feature dayactirka si loo hubiyo in faylasha nidaamka go'an yihiin.
Dayactirka record boot sayidkii.
Haddii markaas loo baahan yahay talo khabiir iyo falanqayn ayaa waxaa sidoo kale soo qaaday in arrintan la xiriira.
Geedi socodka dhameystiran oo ay tahay in la raaco ayaa la sheegay in siyaabo kala duwan ugu URL http://www.selectrealsecurity.com/fix-windows-startup/ iyo Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in Hanuuniyaa waxaa sidoo kale booqday si kastaba ha ahaatee aad u hesho natiijooyinka ugu fiican si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in la sameeyo ka dib markii uu isku labada kor ku xusan waxaa lagu soo booqday markaas user waa in ay sii wadaan la tutorial ah si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah xallinta tahay in arrintan la xiriira ka.
Iyadoo laga bilaabo nidaamka user ku arki kartaa doorasho dayactirka haddii arrinta waa wajiga iyagoo hadii kale waa la heli karaa by gacanta booting nidaamka iyo sii adigoo riixaya muhiim ah F8 ilaa shaashadda u muuqataa,
Dayactirka ikhtiyaarkaaga Kombiyuutarka waa in lagu soo xulo si loo hubiyo in hannaanka horumarka dheeraad ah, user ay u baahan tahay si loo muujiyo iyo in ay sii wadi jaraa'id galaan:
Daaqadaha wuxuu bilaabi doonaa loading files si loo hubiyo in arrinta la xalin:
Habka aqbasho waxaa laga doortaa iyo button soo socda waa in la sii adkeeyey in ay sii wadi:
User ayaa haatan u baahan yahay si ay u helaan degdeg ah amarka gala sida maamule in:
Qalab dayactir xawaaladaha waa in lagu soo xulo si ay u hubiyaan in arrimaha xawaaladaha ayaa la hadlay oo user sii horumarka:
Nidaamka markaas bilaabi doonaa raadinta arrimaha arrintan la xiriira:
Nidaamka celin dhibic markaas waa in loo abuuray si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira:
Button dhameysato waa in la sii adkeeyey si loo xaqiijiyo soo celin dhibic:
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in button qeybtii labaad la isku soo riixayo in la hubiyo in arrintan ay tahay mid go'an oo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah xallinta tahay la in sidoo kale codsatay laga yaabaa in mustaqbalka haddii arrinta ay soo baxdo,
Haddii arrinta aan la xalin waxaa lagula talinayaa in ay soo sheegaan qalad ah in Microsoft oo waxay arki lahayd ka dib markii si faahfaahsan u weyn si ay u bixiyaan user la kulanka:
Waxyaabaha ay is ogow of markii qamaar miiska xijaab aan waxba ka jirin
Si loo hubiyo in arrinta la xalin iyada oo aan wax dhaawac dheeraad ah waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in qodobbada soo socda waxaa loo tixgeliyaa:
Ayaa record kabaha sayidkiisa ama la gooyo waa in la hubiyaa waaqiciga ah si loo hubiyo in user heli uusan gelin ka kaaftoomi ee soo socda habka dheer.
Macluumaadka waa in uu ahaadaa dib in la hubiyo in khasaaraha marnaba dhacdaa arrintan la xiriira iyo sidoo kale user helo natiijada ugu wanaagsan.
In la sameeyo meesha ugu soo celin waa in la sameeyaa on drive kale ee aan ahayn kuwa isagoo daaqadaha ku rakiban in ay si looga hortago waxyeello dheeraad ah.
> Resource > Ladnaansho > Sida loo xaliyo dhibaatada "miiska xijaab aan waxba ka jirin"